Madaxweyne Farmaajo oo si weyn loogu soo dhaweeyay Koofurta Gaalkacyo (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • January 14, 2018
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Galmudug.
Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland iyo Galmudug oo ku kulmaya Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • September 3, 2017
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku kulmaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, si ay u xoojiyaan heshiiska labada dhinaca horay u gaareen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Gaalkacyo u tagay xoojinta heshiiska Puntland iyo Galmudug
Sagal Radio Services • News Report • June 22, 2017
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kaddib markii maalin ka hor magaalada ay heshiis ku kala saxiixdeen maamulada Puntland iyo Galmudug.
Maamulka Galmudug oo gacanta kusoo dhigay Shan nin oo kufsaday Gabar yar
Sagal Radio Services • News Report • April 29, 2017
Taliyaha qeybta Booliska maamulka Galmudug ee gobolka Mudug Gaashaanle Dhexe Maxamed Nuur Cali (Gadaar), ayaa sheegay in ciidamadda Booliiska ay gacanta kusoo dhigeen shan nin oo la sheegay in ay kufsadeen gabar yar.
Iska horimaad khasaare dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Warar goor dhaw naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in iska horimaad khasaare sababay uu halkaa ku dhaxmaray ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Galmudug oo ku eedeysay Puntland in jabineyso xabad joojintii horay loo gaaray
Sagal Radio Services • News Report • December 3, 2016
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in xalay ciidammo ka tirsan Puntland weerar ku qaadeen saldhiga dhexe maamul gobolleedka Galmudug ee ku yaalla koonfurta galbeed ee magaalada Gaalkacyo.
Ra’iisul Wasaaraha oo ugu baaqay shacabkii ka barakacay Gaalkacyo inay dib u soo laabtaan
Sagal Radio Services • News Report • November 19, 2016
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke oo qeyb ka ahaa dadaalada nabadeed ee ka socday magaalada Gaalkacyo ayaa ugu baaqay Maamulada Puntland iyo Galmudug inay ka shaqeeyaan sidii xal waara loo gaari lahaa, si nabad ahna loogu noolaan lahaa magaalada.
Wararkii ugu dambeeyay wadahadalada maamulada Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • November 15, 2016
Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay ku dagaalameen ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa walli ka soconaya dhexdhexaadin laga dhex wado labada Maamul.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo maanta Gaalkacyo ku kulmaya
Sagal Radio Services • News Report • November 12, 2016
Wadda hadallo siweyn loo wadda sugayo ayaa lagu waddaa in maanta magaalada Gaalkacyo ku yeeshaan madaxweynayaasha dowlad gobolleedyada Puntland iyo Galmudug C/wali Gaas iyo C/kariin Xusseen Guulleed oo shalay gaaray magaalada Gaalkacyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh “Colaada Gaalkacyo Qarni ka badan ayay jirtaa, shalay iyo maanta ma dhalan”
Sagal Radio Services • News Report • November 7, 2016
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyay in dowladda Federaalka ay hurineyso dagaalka Gaalkacyo, kaddib markii Maamulka Puntland uu ku eedeeyay in dowladda ay qeyb ka tahay dagaalka, gacanna ay siineyso Galmudug.
Dagaal mar kale saaka dib uga qarxay Galbeedka magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • November 6, 2016
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Galmudug iyo Ahlusuna ayaa saaka dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo, iyadoo dagaalka saaka uu ku fiday goobo cusub.
Wararkii ugu dambeeyay Xaalada magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • October 31, 2016
Waxaa saaka xaalad deganaan ah laga dareemayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku dagaalamayeen ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland.
Puntland iyo Galmudug oo is dhaafsaday maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • October 30, 2016
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in Maamulada Puntland iyo Galmudug ay shalay gelinkii dambey is dhaafsadeen maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaalada maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay galbeedka magaalada.
Xaaladda Magaalada Gaalkacyo oo Saaka Degen
Sagal Radio Services • News Report • October 25, 2016
Waxaa Saaka Degen Xaaladda Magaalada Gaalkacyo Dagaal u dhexeeya Ciidamada Maamulada Puntland iyo Galmudug uu ka soconayo Mudo dhan Saddex Asbuuc.
Dagaal saaka mar kale dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • October 24, 2016
Dagaal ayaa mar kale waxaa uu saaka dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo, kaasoo u dhaxeeya Ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug.
Wararkii ugu dambeeyay Xaalada Gaalkacyo
Xaalad degenaansho oo aan cago adag ku taagneyn ayaa saaka ka jirta magaalada Gaalkacyo, kaddib markii shalay gelinkii dambe illaa xalay fiidkii dagaalo xooggan ka socdeen.
Puntland oo sheegtay in Galmudug iyo dowlada oo iskaashanaya weerareen magaalada Gaalkacyo
Maamulka Puntland ayaa war qoraal ah kasoo saaray dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Dagaal khasaare sababay oo saaka ka dhacay duleedka Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • October 7, 2016
Dagaal u dhaxeeyo ciidamo kala taabacsan Galmudug iyo Puntland ayaa saaka ka dhanka koofureer ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo uu dagaalku sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay labada dhinac.
Faah-faahin kasoo baxeyso dagaal iyo duqeyn ka dhacday duleedka Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • September 28, 2016
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal iyo duqeyn ka dhacday duleedka dhanka bari magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdweli Gaas oo dib ugu laabtay Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • September 3, 2016
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii uu maalmihii la soo dhaafay uu dibada ugaga maqnaa dalka.
Faah faahin ka soo baxaya qaraxyadii Gaalkacyo iyo Al-Shabaab oo sheegatay (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • August 21, 2016
In ka badan 15 ruux ayaa ku geeriyooday qaraxyo xooggan oo maanta ruxay magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, iyadoo qaraxyada ay ahaayeen kuwo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Kooxo Hubeysan oo Gaalkacyo ku dilay Mas’uul ka tirsan Maamulka Puntland
Sagal Radio Services • News Report • June 22, 2016
Kooxo hubeysan ayaa magaalada Gaalkacyo qeybteeda waqooyi ku dilay Isku duwihii Wasaaradda Qorsheynta u qaabilsanaa Gobolka Mudug oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Maxamad Faarax.
Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda Puntland, Jubbaland iyo Galmudug oo ku soo wajahan Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • December 7, 2015
Heshiiska Gaalkacyo oo maanta la dhameystirayo, Gaas iyo Guuleed oo socod ku maraya magaalada
Sagal Radio Services • News Report • December 5, 2015
Heshiiskii arbacadii la soo dhaafay lagu gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa maanta oo sabti ah lagu wadaa in la dhameystiro, lana kala qaado ciidamadii is hor-fadhiyay.
Dagaal mar kale dib uga qarxay Gaalkacyo iyo heshiiskii nabadeed oo fashilmay
Dagaal ayaa goor dhow dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo, kaasoo u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka Puntland iyo Galmudug, maalin kadib markii heshiis nabadeed madaxda labada maamul saxiixeen.
Wada hadalo fool ka fool ah oo maanta la isugu keenayo Madaxda Puntland iyo Galmudug
Sagal Radio Services • News Report • December 2, 2015
Wada hadalo la doonayo in si fool ka fool ah la isugu hor-keeno Madaxweynayaasha Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada Gaalkacyo, iyadoo la filayo in wada hadaladaas laga soo saaro war murtiyeed lagu soo afjarayo colaada Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland oo aqbalay qodobadii uu Ra’iisul Wasaaraha soo jeediyay
Sagal Radio Services • News Report • December 1, 2015
Waxaa goor dhow soo gaba gaboobay kulan u socday Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo Ra’iisul Wasaaraha, iyadoo kulankan goob joog ka ahaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo odayaal dhaqameedyo oo qeyb ka ahaa waan waanta laga dhex wado Puntland iyo Galmudug.
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo Gaalkacyo kula kulmay Madaxweynaha Galmudug
Sagal Radio Services • News Report • November 30, 2015
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo Xildhibaano ayaa xalay Koofurta Gaalkacyo kula kulmay Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo shalay gelinkii dambe soo gaaray Gaalkacyo.
Iska hor imaad u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo saaka dib uga qarxay Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • November 28, 2015
Dagaal u dhaxeeya ciidamada kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa saaka dib uga qarxay magaaladaas, kadib markii odayaashii ku howlanaa waan waantii maalmahan socotay ay ku dhawaaqeen inay bur bureen wada hadaladaas socday ee xalka looga gaarayay.
Xiisad saaka ka jirta magaalada Gaalkacyo iyo dagaalo laga cabsi qabo inay mar kale dhacaan
Sagal Radio Services • News Report • November 24, 2015
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in xiisad dagaal ay ka jirto magaalada, iyadoo wali ay is hor-fadhiyaan ciidamada kala taabacsan Puntland iyo Galmudug.
Deg Deg:- Xabad Joojin looga dhawaaqay Magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • November 23, 2015
Kulan ay maanta Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Suuqa Bartamaha ee Magaalada ay ku yeesheen Waxgarad iyo Ganacsato ka soo kala Jeeda Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa laga soo saaray Qodobo dhowr ah oo lagu xalinayo Dagaalkii Shalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Xaalada magaalada Galkacyo oo saaka kacsan, kadib shaqaaqo ay dad badan ku dhinteen
Ugu yaraan todobo ruux ayaa ku geeriyootay shaqaaqo shalay illaa xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo, kadib markii Ciidamada ammaanka Puntland ay si xoog leh uga saareen dad deganaa guryihii dowladdii hore, taasoo ka dhalatay iska hor imaad.
Qarax ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • April 7, 2015
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Qarax Miino loo dhigay Gaadiid uu la socday Guddoomiye Kuxigeenka Gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur.
Weerar Bambaano oo xalay lagu qaaday Idaacada Radio Galkacyo
Sagal Radio Services • News Report • January 17, 2015
Weerar bambaano ayaa xalay lagu qaaday Idaacada Maxaliga ah ee Radiyo Galkacyo ee Gobolka Mudug, iyadoo weerarkan uu yahay kii labaad oo Idaacada lagu qaado labo todobaad ah.
Kooxo Hubeysan oo caawa fiidkii ku dilay magaalada Galkacyo Wariye u shaqeynayay Radio Daljir
Sagal Radio Services • News Report • November 19, 2014
Kooxo Hubeysan ayaa caawa ku dilay magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug Wariye u shaqeynayay Idaacada Daljir, iyadoo kooxihii dilka geystay ay baxsadeen.
Ciidmada Puntland ee Gaalkacyo oo la Weeraray iyo Sarkaal lagu dilay Gedo
Sagal Radio Services • News Report • June 20, 2014
Wararka laga helayo magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in kooxo hubeysn ay weerareen koontarool ay ku sugnaayeen ciidammo ka tirsan Puntland oo ku yaalla Gaalkacyo, iyadoo sidoo kale ay kooxo hubeysan ku dileen deegaanka Ceel-cadde ee gobolka Gedo sakaal ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya.
Ciidamo ka tirsan Puntland oo lagu Qarxiyey Magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • June 14, 2014
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Bamgacmeed Saaka lagu Weeraray Gaari Ciidan oo ay wateen Ciidamada Maamulka Puntland ee Waqooyiga Gaalkcayo.
Ciidamada Puntland oo Gaalkacyo ku qabtay Dhalinyaro Tahriibayaal ah
Sagal Radio Services • News Report • June 13, 2014
Sida ay sheegayaan wararka laga helaayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada Amaanka Maamulka Puntland ee Magaalada Gaalkacyo ay Saaka gacanta ku dhigeen Dhalinyaro Tahriibayaal ah oo doonayey in ay ka Tahriibaan Magaalada Boosaaso ee Goboka Barri.
Howl galo lagu soo qab-qabtay ilaa 15-ruux looga shakiyay Al-Shabaab oo laga sameeyay W/Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • April 19, 2014
Ciidamada Ammaanka Puntland ayaa howl galo sacaadihii u dambeeyay ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada Galkacyo ku soo qab qabtay ilaa 15-ruux looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Madaxweyneyaasha Puntland & Galmudug oo maanta ku kulmay Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • April 17, 2014
Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ayey uga hadleen arimo kala duwan.
Madaxda Galmudug iyo Ximen iyo Xeeb oo kulan xasaasi ah Galkacyo ku yeeshay.
Sagal Radio Services • News Report • January 29, 2014
Kulankan oo qeyb ka ah kulamo mudooyinkii u danbeeyaba ka dhacayay Muqdisho,Nairobi iyo meelo kale oo ka mid ah Daafaha caalamka loogana arinsanayay aayaha bulshada ku Nool gobolada dhaxe ee dalka iyo sideey u yeelan lahaayeen Maamul ay ku mideysanyihiin ayaa waxaa maanta Hotelka FiveStar ee magaalada galkacyo uu uga bilowday madax ka Kala socotay Maamul Gobaleedyada Galmdug iyo Ximan iyo xeeb kuwaasi oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha maamulka ximan iyo xeeb Mudane C/laahiCali Maxamed Baarleex iyo madaxweyne ku xigeenka Galmdug C/samad Nuur Guuleed.
Dagaal Culus oo u dhaxeeya Ciidamo kala taabacsan Galmudug iyo Puntland oo xiligan soconaya
Sagal Radio Services • News Report • November 4, 2013
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in xiligan deegaan hoos taga Magaaladaasi uu kasocdo Dagaal u dhaxeeya Ciidamo kala taabacsan Galmudug iyo Maamulka Puntland.
Agab shaqo oo la guddoonsiiyay maamulka Gaalkacyo ee Galmudug
Sagal Radio Services • News Report • May 17, 2013
Ururka caalamiga ah ee Shaqaalaha adduunka ee ILO, ayaa qalabka xafiisyada iyo agab kaleba ugu deeqday maamulka magaalada Galkacyo ee maamul goboleedka Galmudug.
Rag lagu eedeynaayo burcadnimo oo Gaalkacyo lagu xiray
Sagal Radio Services • News Report • December 16, 2012
Ciidamada ammaanka ee maamulka Galmudug, ayaa howl gal ay ka sameeyeen xalay gudaha magaalada Gaalkacyo, ayaa waxay ku soo xireen dhalin yaro looga shakisan yahay falal burcadnimo ah.
Is-rasaaseyn sababtay dhaawacyo oo xalay Gaalkacyo ka dhacday
Sagal Radio Services • News Report • November 26, 2012
Laba ruux oo rayid ah, ayaa ku dhaawacantay iska hor imaad xalay waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland ku dhex maray dablay hubeysan iyo ciidamada ammaanka magaalada Gaalkacyo oo ku guda jiray roondo ay amniga ku sugayeen.